PSJTV | परिवारभित्रै बलात्कारको त्रासः बुबाले छोरीलाई, नातिले हजुरआमालाई !
परिवारभित्रै बलात्कारको त्रासः बुबाले छोरीलाई, नातिले हजुरआमालाई !
हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङमा बलात्कारका घटना बढेका छन् । बुबाले छोरीलाई नातिले हजुरआमालाई समेत बलात्कार गरेको खुलेको छ । नौ बर्षकी बालिकासमेत बलात्कार भएकी छिन् ।
आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाकी १७ बर्षीया किशोरीलाई उनकै ४० बर्षीय बाबुले पटक—पटक बलात्कार गरेको उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा परेको नयाँपत्रिकामा खबर छ । किशोरीले बलात्कार भएको बताएपछि भागेका बुवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएसपी ज्ञानेन्द्रबहादुर बस्नेतले बताए ।
बिहे गरेर अमेरिका लाने भन्दै ४२ लाख ठगी
यादव नेतृत्वको फोरम नेकपामा समाहित हुँदै
काठमाडौं : घरजग्गा व्यवसायी तथा ओरेन्टल सहकारीका अध्यक्ष सुधीर बस्नेत पक्राउ परेका छन् । बस्नेतलाई पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसरका होविन्द्र बोगटीले बताए । व्यवसायी वस्नेत यसअघि पनि ठगी प्रकरणमा जेल परेका ...
काठमाडौँ: मन्त्रिपरिषद्को यही चैत ४ गतेको बैठकले रेल खरीददेखि निकुञ्ज व्यवस्थापनसम्मका २१ वटा निर्णय गरेको छ । बैठकले भारतको सरकारी कम्पनी कोङ्कण रेलवेज् कर्पोरेशन लिमिटेडमार्फत दुई सेट डिजेल इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट ...
काठमाडौं: रुसको राजधानी मस्कोमा ७३ जना सवार एक विमानमा आगलागी हुँदा कम्तीमा ४१ जनाको मृत्यु भएको छ । घाइते ६ मध्ये तीन जनाको अवस्था गम्भीर छ । मस्कोको शेरेमेत्यवो हवाई अड्डाबाट ...